ODM Kutaa 185ffaa yaada ilmaan Oromoo magaalaa Lakkuu Minneapolis&St.paul tamsaasa kallattiidhaan. – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosODM Kutaa 185ffaa yaada ilmaan Oromoo magaalaa Lakkuu Minneapolis&St.paul tamsaasa kallattiidhaan.
ODM Kutaa 185ffaa yaada ilmaan Oromoo magaalaa Lakkuu Minneapolis&St.paul tamsaasa kallattiidhaan.
Ameerikaa kutaa bulchiinsa Californiatti ambassador Bilxiginaa kan turan Dr.Birhaaneemasqal Sanyiis Uummata waliin state Capitol fulduratti marii gaggeessudhaaf jiru.
የዶ/ር ብርሃነ መስቀል ሰኚ “Freedom Tour” በሚኒሶታ
VOA Amharic coverage of the #Irreecha2020 celebration in Addis Ababa
Kan waraanaa fi ololaan biyya goolaaru/shoororkeessaaru Abiyyii fi mootummaa Nafxanyaa inni hoogganu.
Qe’een Oromoo naga. Oromoon ummata nagaati. Kanaaf ragaan birriin biliyoona 67 (in cash) rakkoo tokko malee magaalaa fi baadiyaa biyyattii hunda keessa raabsamuu isaati. Yoo Oromoo gooluu fi ukkaamsuu barbaadan akkanatti waraana ummatatti bobbaasu. Kun Baadmee malee Finfinnee fi Bishooftuu fakkaataa?
Oromoo fi aadaa isaa ukkaamsuuf fageenyi Abiyyi deeme isas, biyyattiis gatii guddaa kaffalchiisa.
Bushooftuutti Irreechi Hora Harsadee namoota muraasa qofaan akka kabajamu taasisamee oole, Hirmaattoota hedduu irraa miirri mul’ataa tures qabanaahaa ta’uu gabaasaan VOA bakka sanatti argame ibsee jira. Namoonni baajii ittiin galinsaa hin qabne hedduun daangaa Bushooftuu fi magaalattii keessaa qabamanii of irra deebisamanii jiran,
Bulchiinsi magaalaa Bushooftuu gama isaatiin ayyaanichi nagaan xumuramuu ibsee, daangaan kan itti taasisameef uummatumaaf jecha, jedhee jira. Gabaasaan VOA
, Kantiibaa magaala Bushooftuu Addee Alamtsehaay Shifarraaw fi hirmaattota Irreecha Hora Harsadee amma tokko dubbiseera, daawwadhaa.
oromoo sobaa pp argii!
Mee maxxansa qondaala mootummaa kan ta’e #Awalu_Abdu jedhamu kanaa ilaalaa!Qeerroon alaabaa ABO uffatee poolisootaan qabame kun Abdii Mohammed Huseen jedhama Ilma Oromoo qulqullicha sanyii Waaqoo Guutuuti.bar darbe irreecha Hora Finfinnee yommuu dhufutti poolisiin akkasiin qabde.Sun xiqqaannaan baranammoo “Teklay Hagos jedhama Irreecha irratti boombii dhoosuuf osoo socho’uu qabame” jedhanii miidiyaa irratti hololaa jiru.Bilxiginnaan holola rakasa akkasiin fudhatama argadha jettee xibaarti
OMN: IRREECHA 2020 AMSTERDAM (Onk 4, 2020)
ODUU GADDAA: AJJEECHAA SUUKANNEESSAA
As of today October 5, 2020 Abiy Ahmed no longer has a constitutional mandate to rule Ethiopia.